Xildhibaano sheegay in ardayda Puntland ay helayaan shahaadooyinka Dowlada Federalka | Jowhar Somali news Leader
Home News Xildhibaano sheegay in ardayda Puntland ay helayaan shahaadooyinka Dowlada Federalka
Xildhibaano sheegay in ardayda Puntland ay helayaan shahaadooyinka Dowlada Federalka
Qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto Puntland ayaa sheegay in xal laga gaaray khilaafkii ku saabsanaa shahaadooyinka ardayda dugsiyada sare ee Puntland ayna heli doonaan ardayda shahaadooyinka ay bixiso wasaarada waxbarashada dowlada federalka Soomaaliya.
Xildhibaanadan oo shir jaraa’id ku qabtay maanta magaalada Muqdisho ayaa waxa ay shaaciyeen in madaxda sare ee dalka ay amartay in si deg-deg ah loo dhameeyo tabashada ardayda Puntland ayna labada wasaaradood ee Dowlada federalka iyo Puntland ka wadahadlaan qaabkii ay ardayda u heli lahaayeen shahaadooyinkooda.
“Madaxweynaha iyo ra’iisul wasaarahaba markii aan la kulanay waxa ay noo muujiyeen dareenkooda ah in aysan ardaydu mudneen isku tuur tuur iyo in la siyaasadeeyo shahaadooyinkooda.”ayay tiri Senator Siciido Xasan oo ka mid ahayd xildhibaanadan ka hadlay shirka jaraa’id.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay Wasaarada Waxbarasahada Dowlada Federalka oo cadeynaya in amarkan ka soo baxay madaxda sare ee dalka.
Khilaaf muddo ka taagnaa arintaan ayaa sababay in sanad dugsiyeedkii u dambeeyey ardaydii wax ku baratay deegaanada Puntland aysan helin shahaadada dugsiga sare ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee heer federaal.